Hackathon Ho an’ny Daholobe: Ahoana ny Fanomanana Hackathon? · Global Voices teny Malagasy
Hackathon Ho an'ny Daholobe: Ahoana ny Fanomanana Hackathon?	Voadika ny 23 Novambra 2012 10:00 GMT
Zarao: [Amin'ny teny espaniola avokoa ny rohy ankoatra izay marihana manokana]
Amin'ity lahatsoratra manaraka ity, ny vahiny, J.J. Merelo, Dokotera amin'ny Fizika sady Profesora ao amin'ny Anjerimanontolon'i Granada, Espaina, no miresaka amintsika ny zavaniainany tamin'ny fanomanana hackathon ara-panabeazana ho fanazavana ny Hackathon rezionaly Fampandrosoana an'i Amerika Latina 2012 [en] izay hotontosaina amin'ny volana ambony amin'ny Desambra.
Raha ny tokony ho izy, tsy tokony hiteraka fisalasalàna loatra ny voambolana hackathon: marathon + mampitandahatra [programming]. 52 kilaometatra ny mampitandahatra manadra-pahatòran'ny iray noho ny fahasemporana. Tongavan'ny hafa vitsy, hiteny ianao, andao, andao hanao programa [fampitandaharana] ! Misy misalasala? Tsia? Andao ary.
Raha ny marina, tsy mora ny manao izany ary nanatontosa izahay rehefa nikarakara ny hackathon tetikasan-drindrambaiko malalaka voalohany tao amin'ny UGR (Anjerimanontolon'i Granada).
Saripika avy amin'ny rakitsary Hackathon ao amin'ny Picasa, nampiasaina noho ny lisansa Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
Natao ity hackathon ity ahafahana manohana ireo tetikasa mandray anjara amin'ny Fifaninanana Rindrambaiko Malalaka, izay hankalazainy fanindroany ao Granada. Ny hevitra voalohany dia ny hampahafantatra momba ireo tetikasa, hanintona ny fiarahamonina ary, mazava loatra, hanome tosika hanampiana ireo mpandray anjara avy ao amin'ny UGR hiasa amin'ny tetikasany ary hamaha ny olana mety hisy. Tsy fantatro izay hevitra ao aminay raha mitsotra aho. Raha mba tonga moa ny olona za-draharaha indrindra ao amin'ny UGR amin'ny Java [en], Python [en], MVC environment [en] ary, mazava loatra, amin'ny fomba fampitandaharana.
Eny manko, nataonay daholo izany. Ambonin'izany, tonga te-hianatra, miaraka amin'ireo taona voalohany, sy ilay tovolahin'ny fifandraisandavitra izay sambany nahita ny Java ary nianatra fa anarana basy poleta izany Python izany. Sy ireo mpandika teny. Rehefa manao hackathon ao amin'ny anjerimanontolo ianao, ho avy daholo ny olona avy ao amin'ny anjerimanontolo. Toerana lehibe ny anjerimanontolo sady itoeran'ny fahasamihafàna.
Sarotra dia sarotra ny mahavita fampifandaharana [programming] miainga avy amin'ny voambolana “go” [mandehana]. Tsy maintsy efa nianarana ny fitaovana ampiasaina, amin'ny ankapobeny izy ireo fitaovana ho amin'ny fampandrosoana iarahamiasa sy tambajotra sosialy. Eny e, tambajotra sosialy. Azonao atao ny mino na tsia, maro kokoa ny mpisera Whatsapp noho ny mpisera Twitter. Eo ihany koa ny fomba fampivelarana [methodologie de développement]. Tsy momba ‘anao’ izany, na ianao manao itsy na ianao manao iry fa inona no atao, ahoana no hanaovana azy ary iza no hiara-manao ilay izy. Amin'iza no anoloranao ny vokany? Ahoana no anaovana fanandramana ilay fampivelarana [développement] ahafahana matoky fa mety ilay izy? Ny zavatra rehetra. Izany ary no fanombohan'ny hackathon: mitarika ny rehetra ho haingana sy ho tafaraka ambaratonga araka izay tratra. Ary amin'izany, feno ny ora voalohany.
Raha ny marina, feno tsara mialoha ny ora voalohany: amin'ny fananganana ny hackathon. Mila ifandaminan-draharaha iezahana mamaha ny olana iraisana ny tetikasan'ny mpandray anjara rehetra. Raharaha ho an'ny ambaratonga rehetra, hatramin'ny ambaratongan-dry Jennifer ao amin'ny Vahoakan'ny IT: zara raha mahalala mitendry ny totozy indray na indroa, hatramin'ny ambaratongan'ny : “Aza matahotra, efa namorona mpandika teny eo noho eo vaovao amin'ilay “language” noforoniko indray folakandro aho.” Ary, mazava loatra, manomana ny raharaha manokana amin'ny tetikasa izay hokatrohinao. Inona ny libraries [trano famakiamboky?] fampiasako ary nahoana? Manana fepetra manokana ve aho hanaovana kaody? Mampiasa “language” hafahafa tsy misy mahafantatra ve aho ka hampianatra izany amin'ny olona? Tahaka izany, feno ny ora manaraka.
Sary nalaina avy amin'ny rakitsary Hackathon ao amin'ny Picasa, nampiasaina noho ny lisansa Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
Soa ihany, ny mampitandahatra [programming] no manaraka, ary mila toerana sy fotoana izany. Fotoana ampy ahafahana manomboka sy mamarana ny raharaha sy toerana ahafahana mampandroso azy. Tokony ho tsara ny fifandraisana an-tserasera ary mazava tsara ny toerana (ho ahy ny jiro no ao an-trano iasanay) ary ambonin'izany rehetra izany, fantatry ny mpitondra pizza tsara mba hahatongavany tsara sy haingana. Mety ho bar aza, fa tokony hisy “pirizy” ao ary tsy tokony hisy ho ratsy fijery ireo tsy sasatry manary labiera isan'ora. Na mahalany labiera telo ao anatin'ny atsasakadiny ianao. Indraindray ilay mikaody mila fisotroana octane avoavo ihany.
Any amin'ny farany misy andiana fanalahidy telo ahafahana mampahomby hackathon iray: fitandremana (ary tsy maintsy avoitrako matetika, imbetsaka, amin'izay teneninao, eny amin'ny afisy, tambajotra sosialy hatramin'ny filazana an-gazety), fiomanana sahaza avy amin'ny tetikasa mandray anjara (fanaovan-draharaha ampy sy fiofanana ampy ho an'ireo hirotsaka an-tsehatra) sy tetikasa manintona (raha misy olona te-hanangana fampitambatambarana Brainfuck [en] tsy hahomby tahaka ireo te-hanao fampiasa [app] finday hitadiava-namana izy ireo). Ny farany mazava loatra, tsy afa-manome antoka ianao. Mampalahelo araka ny itarafana azy, mety tsy hiainga ny tetikasa, ka amin'ny maha-mpikarakara anao, tsy maintsy manana zavatra atolotra avy any amin'ny tanan'akanjonao any. ‘hackathoner mpiambina’ raha tianao.
Fikarakarana ny 2012 hackathon 2012 avy amin'i Juan Julián Merelo Guervós
Inona no azonao any amin'ny faran'ny hackathon? Mikaody mazava loatra. Tsy milaza izany fa lanonana sosialy izay mandeha tsy mitondra na inona na inona ny mpandray anjara, fa tahaka ny mpiara-manatontosa ary indraindray mahazo finamanana faraparany. Noho izany, ho avy hanatontosa ity indray izahay amin'ny herintaona. Raha any Espaina ianao, ho any amin'ny tetikasa hackaton UGR fahadimy ve ianao? Ary raha any Amerika Latinina, hiditra ao amin'ny Dal2012 ve ianao?
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraJJ Merelo
Tantaran'ny Eoropa Andrefana farany 14 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaDia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa
Soratra miverina: Andro Faha-2 Ho Fampandrosoana An’i Amerika Latina 2012 · Global Voices teny Malagasy	[…] Latin America 2012 [en] Inona marina ny atao hoe hackathon ary inona ny angon-drakitra misokatra? Hackathon Ho an'ny Daholobe: Ahoana ny Fanomanana Hackathon? Miha-antomotra ny Hackaton Developing Latin America! Andro faha-1 ho fampandrosoana an'i […]
29 Desambra 2012, 19:11	Ajanony ihany
Amerika LatinaEoropa AndrefanaEspaina
Mediam-bahoakaTeknolojiaTeknolojia mampangarahara asa